Amathiphu aphezulu ayi-5 Wokuhlola Ubukhulu | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 23, 2012 NgoMsombuluko, Januwari 22, 2018 UHanna Johnson
Kukhona iqiniso elilula elethwe ngenkathi ye-Intanethi: Ukucela impendulo nokuthola ukuqonda ngamakhasimende akho nemakethe okuqondiswe kuyo kulula. Lokhu kungaba yiqiniso elimangalisayo noma elenza umuntu wesabe, kuya ngokuthi ungubani nokuthi ufuna impendulo ngani, kepha uma usemakethe ukuze uxhumane nesisekelo sakho ukuthola umbono wabo othembekile, unamathani yezinketho zamahhala nezindleko ezisebenzayo ongazenza. Kunezindlela eziningi ongakwenza ngazo lokhu, kepha ngisebenza ku SurveyMonkey, ngakho-ke indawo yami yobungoti, ngokwemvelo, ukudala izinhlolovo eziku-inthanethi ezinikeza imiphumela ecacile, ethembekile, engenzeka.
Sithatha inhloso yethu ukukusiza ukuthi wenze izinqumo ezinhle kakhulu ngokungathi sína, noma ngabe uzama ukunquma ukuthi yisiphi isithombe ozosisebenzisa kukhava, ukuthi yikuphi ukuthuthukiswa komkhiqizo okufanele ubeke phambili, noma iziphi izithambisi ezizosebenza ephathini lakho lokwethulwa. Kepha kuthiwani uma ungakaze wenze inhlolovo eku-inthanethi, noma udidekile ngazo zonke izici ezinhle (yeqa umqondo? Ingabe lelo uhlobo lwedutch ephindwe kabili ??)
Ngizogcina ubunzima bezici zethu zokuhlola kwesinye isikhathi (yize ngingakutshela ngokuphepha, Yeqa Ingqondo ayihlanganise lutho nezintambo zokugxuma). Kepha ngizokwabelana nawe ngalawa macebiso aphezulu angama-5 wokwenza ucwaningo olukhulu online.
1. Chaza ngokusobala injongo yocwaningo lwakho oluku-inthanethi
Ubungeke uqalise umkhankaso wesikhangiso ngaphandle kokucacisa izinhloso zomkhankaso (khulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo, shintsha ukuguqulwa, udelele izimbangi zakho, njll), akunjalo? Izinhloso ezingacacile ziholela emiphumeleni engacacile, futhi yonke inhloso yokuthumela inhlolovo eku-inthanethi ukuthola imiphumela eqondakala kalula futhi esetshenziswayo. Ucwaningo oluhle lunenhloso eyodwa noma ezimbili ezigxile okulula ukuziqonda futhi uzichaze kwabanye (uma ungazichazela kalula i-8th grader, usesendleleni efanele). Chitha isikhathi phambili ukukhomba, ngokubhala:
Kungani wenza le nhlolovo (iyini inhloso yakho)?
Yini onethemba lokuthi lolu cwaningo luzokusiza ukufeze?
Yiziphi izinqumo othemba ukuthi uzozithinta ngemiphumela yalolu hlolo, futhi yimaphi amamethrikhi wedatha asemqoka ozodinga ukufika lapho?
Kuzwakala kusobala, kepha sesibonile inhlolovo eningi lapho imizuzu embalwa yokuhlela ibingenza umehluko phakathi kokuthola izimpendulo zekhwalithi (izimpendulo eziwusizo nezisebenzisekayo) noma idatha engahumusheki. Ukuthatha eminye imizuzu embalwa ekugcineni kohlolo lwakho kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi ubuza imibuzo efanelekile ukuhlangabezana nenhloso nokwenza idatha ewusizo (futhi kuzokusindisa isikhathi nesikhathi nekhanda ekugcineni).
2. Gcina Ucwaningo Lufushane Futhi Lugxile
Njengezindlela eziningi zokuxhumana, inhlolovo yakho eku-inthanethi ingcono kakhulu uma imfishane, imnandi, futhi ifinyelela ephuzwini. Ukusiza okufishane nokugxile kukho kokubili ikhwalithi nobungako bempendulo. Ngokuvamile kungcono ukugxila enhlosweni eyodwa kunokuzama ukwakha inhlolovo eyinhloko ehlanganisa izinhloso eziningi.
Ucwaningo olufushane ngokuvamile lunamazinga aphezulu okuphendula kanye nokushiywa okuncane phakathi kwabaphenduli bocwaningo. Kungumvelo womuntu ukufuna izinto zisheshe futhi zibe lula - uma umuntu othatha inhlolovo elahlekelwa yintshisekelo bavele bashiye lo msebenzi - bakushiye nomsebenzi omubi wokuhumusha leyo setha yedatha (noma uthathe isinqumo sokuyikhipha ndawonye).
Qiniseka ukuthi yonke imibuzo yakho igxile ekusizeni ukuhlangabezana nenhloso yakho eshiwo (Awunayo eyodwa? Buyela esinyathelweni 1). Musa ukuphonsa imibuzo 'enhle ukuba nayo' enganikeli ngqo idatha ukukusiza uhlangabezane nezinhloso zakho.
Ukuze uqiniseke ukuthi ucwaningo lwakho lufushane ngokulingene, nika abantu abambalwa ngenkathi bayithatha. Ucwaningo lweSurveyMonkey (kanye noGallup nabanye) lukhombisile ukuthi inhlolovo kumele ithathe imizuzu emihlanu noma ngaphansi ukuyiphothula. Imizuzu engu-6 - 10 yamukelekile kepha sibona amazinga okushiya abalulekile avela ngemuva kwemizuzu eyi-11.
Qiniseka ukuthi imibuzo yakho ifinyelela eqophelweni futhi uvikele ukusetshenziswa kwe-jargon eqondene nomkhakha othile. Sivame ukuthola ucwaningo olunemibuzo kulayini othi: “Ugcine nini ukusebenzisa i- (faka imboni yezobuchwepheshe mumbo jumbo lapha)? "
Ungacabangi ukuthi abathathi bezinhlolovo zakho banethezekile ngama-akhronimi akho nolimi lwakho njengoba unjalo. Isipele yona (khumbula ukuthi i-8th ibanga uqhubise izinhloso zakho ngalo? Cela impendulo yabo - yangempela noma ecatshangelwayo - ngalesi sinyathelo futhi).
Zama ukwenza imibuzo yakho icace futhi iqonde ngangokunokwenzeka. Qhathanisa: Yini isipiliyoni sakho ebesisebenza nethimba lethu le-HR? Ku: Waneliseke kangakanani ngesikhathi sokuphendula seqembu lethu le-HR?
4. Sebenzisa imibuzo evaliwe lapho kungenzeka khona
Imibuzo evaliwe yocwaningo inika abaphenduli ukukhetha okuqondile (isb. Yebo noma Cha), okwenza ukuhlaziywa kwakho kusebenze lula kakhulu. Imibuzo evaliwe ingathatha uhlobo lweyebo / cha, ukukhetha okuningi, noma isilinganiso sesilinganiso. Imibuzo evulelekile yocwaningo ivumela abantu ukuthi baphendule umbuzo ngamazwi abo. Imibuzo evulekile ivulekile ukwengeza idatha yakho futhi ingahlinzeka ngemininingwane efanelekile yekhwalithi nokuqonda. Kepha ngezinhloso zokuhlanganisa nokuhlaziya, imibuzo evaliwe ayinzima ukuyishaya.
5. Gcina Imibuzo Yesilinganiso Esilinganisanayo KuSaveyi
Izilinganiso zokulinganisa ziyindlela enhle yokukala nokuqhathanisa amasethi okuguquguqukayo. Uma ukhetha ukusebenzisa izikali zokulinganisa (isb. Kusuka ku-1 - 5) qiniseka ukuthi uzigcina zingaguquguquki kulo lonke ucwaningo. Sebenzisa inani elifanayo lamaphoyinti esikalini (noma okungcono okwamanje, sebenzisa amagama achazayo), bese uqinisekisa ukuthi izincazelo zokuhlala okuphezulu nokuphansi kuyahambisana kulo lonke ucwaningo. Futhi, kuyasiza ukusebenzisa inombolo eyinqaba esikalini sakho sokulinganisa ukwenza ukuhlaziywa kwedatha kube lula. Ukushintsha izikali zakho zokulinganisa kuzodida abathathi bezinhlolovo, okuzoholela kuzimpendulo ezingathembekile.
Yilokho kuphela ngamathiphu aphezulu ama-5 wobukhulu bocwaningo, kepha kukhona ithani lezinye izinto ezibalulekile okufanele uzikhumbule lapho udala inhlolovo yakho eku-inthanethi. Phinda ubheke lapha ukuthola amathiphu amaningi, noma hlola ibhulogi yethu yeSurveyMonkey!
Tags: imibuzo ephelile yocwaningoimibuzo evulekile yokuphenyaizilinganiso zokulinganisayeqa umqondoukwakheka kocwaningoubude bocwaningoinhloso yocwaningoimibuzo yokuhlolaamathiphu okuhlolaSurveyMonkeyUkuhlolazoomerang
Ngo-Apr 24, i-2012 ku-2: i-04 PM
“Qiniseka ukuthi umbuzo wakho ngamunye ugxile ekusizeni ukufeza inhloso yakho oyibekile”
Iphuzu elihle. Awufuni ukuchitha isikhathi sabantu ngemibuzo ebucayi engeyona eyemishini. Isikhathi sekhasimende sibalulekile, ungasichithi emibuzweni eguqulayo!